Ku beddel xogta CAD-GIS-ga GGG ArcGIS Pro - Gofumed
Mee, 2019 ArcGIS-ESRI, Baridda CAD / GIS
Beddelaan xogta dhisay GIS format barnaamijka CAD la joogto ah aad caadi u ah, gaar ahaan, maxaa yeelay, nidaamo injineernimada sida muuqaalka guud ee dhulka, sahan ama dhismaha weli isticmaalaan files dhisay design barnaamijyada computer (CAD), la macquulka ah ee dhismaha aan u janjeedha shay laakiin tuuri khadadka, geesoolayaashu, iyo kooxaha tag ku yaala lakabyada kala duwan (layers). Iyadoo versions cusub ee software CAD waa is dhexgalka wax-oriented sii kordheysa la database-da'ayeen hab, waafaqid dhexeeya edbiyo, kuwaas oo weli u baahan tahay geeddi-beddel.
Waxa la filayo in la helo: ka soo saar xarfaha faylka CAD illaa GIS, mar dambe falanqaynta aagga, tusaale ahaan waxaan isticmaaleynaa faylka CAD oo ku jira macluumaadka ashyaada cadastarada, macluumaadka baadka, taas oo ah Rivers iyo dhismayaasha kale ee la dhisay.
Waxa lagaa rabo dhamaadka geedi-socodka waa lakabka dhulka, lakabka webiyada iyo lakabka qaababka, qaabka ugu horeeya ee lakabka kasta wuxuu adeecaa nooca asalka.
Xogta iyo sahayda la heli karo: faylka CAD, kiiskan dwg of AutoCAD 2019.
Isku xirka Tallaabooyinka la leh ArcGIS Pro
Tallaabada 1. Soo qaado faylka CAD
Sida kor ku xusan waa inaad haysataa feyl, .dgn ama .dxf, (qaab CAD ah), waxaa laga soo xulay tabaha Map doorashada Ku dar Xogta, waxaa jira faylka udhaxeeya raadinta. Halkan wuxuu ku bilaabmayaa dhibaatada ka muuqata xogta ku jirta nuqulka faylka, waxaanu haynaa faylka .dwg AutoCAD 2019, marka lakabka la galo ArcGIS Pro, nidaamku wuxuu akhriyaa lakabyada lakabyada, laakiin miiska sifuhu wuxuu u muuqdaa in lakabyada aysan ku jirin wax hanti ah, sida lagu arki karo shaxdan soo socota.
Marka aad fiirinayso faylka asalka ah, AutoCAD Civil3D waxaa loo arki karaa in uu hayo macluumaad.
Ka hor inta aadan rumaysan in faylka uu yahay mid musuqmaasuq ah ama uu hayo wax macluumaad ah, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo nuqulada digo laga aqbalo ArcGIS Pro:
Wixii ah .dwg iyo .dxf
Akhrinta, laakiin aan la dhoofin: 12 iyo 13 version of AutoCAD
Akhrinta tooska ah iyo dhoofinta: Qoraalkii AutoCAD 2000 v15.0, 2002 v15.0, 2004 v16.0, 2005 v16.1, 2006 v16.2, 2007 v17.0, 2008 v17.1, 2009 v 17.2, 2010 v18.0, 2011 v18.1, 2012 v18.2, 2013 v19.0, 2014 v19.1, 2015 v 20.0, 2016 v20.1, 2017 v21.0 iyo 2018 v22.0.
Wixii ah .dgn
Akhrinta, laakiin aan la dhoofin: MicroStation 95 v5.x, MicroStation SE v5.x, MicroStation J v 7.x
Akhrinta tooska ah iyo dhoofinta: MicroStation V8 v 8.x
Sida aad arki karto, waqtiga qoraal tutorial this, ArcGIS Pro uusan weli taageero akhriska iyo dhoofinta xogta AutoCAD 2019, sidaas darteed ma jiro bandhigay of hay'adaha hortiisa, waa cajiib in ArcGIS Pro ma tilmaamayso qaladaad inta lagu guda jiro hoggaansanaayeen layers, hana ka digay in file ah lama jaanqaadi karaan version ah. Shuban macluumaad si qaab-dhismeedka CAD laakiin xogta lahayn.
Kadib markii la aqoonsaday tan, waxay ahayd lagama maarmaan in la isticmaalo TrueConverter si loo baddalo feylka dwg, kiiskan waxaan ku dhignay nooca 2000.
Tallaabada 2. Isku bedel xogta laga helay faylka CAD ee SHP
Lakabyada aad rabto in la soo saaro waa la cayimay, haddii dhamaan xogta CAD-ga loo baahan yahay, waa in aan kaliya soo saaraa walxad kasta qaab muuqaal ah, marka CAD la soo xushay, muraayad ayaa soo baxaysa. CAD Qalabka, qalabyada aad ka heli karto habka Koobi Noocyada, guddi ayaa furan oo muujinaya xuduudaha wax soo saar iyo xayeysiinta; Fikradda waa lakabka la xushay, kiiskan kakooban, iyo wax soo saarka wuxuu noqon karaa fayl gaar ah ama xarfaha geodka la xidhiidha mashruuca, markaad hubiso in habka la fulinayo lakabka lagu darayo qaybta tusmada .shp.
Tallaabada 3. Falanqee isku dheelitirnaanta maqaar la'aanta
Waxaa sidoo kale jira farqi, kaas oo lagu soo saaro habka "polyvin" marka GIS (qaab) la soo saaro. Maaddaama muuqaalku soo ifbaxay qaabka asalka ah, sawirada iyo qulqulka kiiskani, waa in loo rogaa calaamadaha, taas oo hadba ku xiran kiiska iyo shuruudaha
Wabiyadaha, habka sida caadiga ah ayaa loo sameeyaa, si kastaba ha ahaatee, waxaa la ogaaday in webiga ugu weyn iyo qaybihiisa ay ka kooban yihiin qaybo badan. Si aad iyaga ugu biirto, tab ayaa loo doortaa Isbedel, - qalab Isku duwo, iyadoo tanna ay ku biirto qaybaha u dhigma wabiga weyn, iyo sidoo kale qayb kasta oo ka mid ah xudduudaha.
Waxaad sidoo kale arki kartaa in lakabka ay ku jiraan webiyada waxaa jira khad, taas oo ay sabab u tahay qaabkeeda iyo meesha, ma aha mid ka mid ah lakabka, waa la tirtiray, iyada oo la hagaajinayo lakabka horey loo abuuray.
Muxuu polylines iyo alaabtu u muuqdaan kuwa aan u dhigmin joomatirka ee santuuqa? Ujeedadu waxay ka timid barnaamijka CAD si loo nadiifiyo lakabyada walxaha aan ku habboonayn, si kastaba ha ahaatee, ujeeddooyinka layligan ayaa sidan loo sameeyay. Tusaale ahaan, faylka isirku wuxuu leeyahay 3D xayirad la socota, oo ka yimid faylka AutoCAD Recap, marka ay ku jirto aragtida 2D, waxay noqonaysaa mid caan ah.
Haddii dhacdooyinka kor ku xusan ay horay uga soo eegaan faylka CAD:
Si aad u soo saarto geesaha jira ee CAD (1), waxaad samayn kartaa habka soo socda sida loo sameeyo si joogto ah ArcMap: badhanka midig ee lakabka - Macluumaadka - Noocyada Ganacsiga, waxay muujinaysaa waddada ka soo baxda iyo qaabka xagjirnimada ayaa ka muuqan doona guddiga content.
Xaaladdan oo kale, waxaa lagu sameeyay lakabyo badan oo asal ahaan ka mid ah faylka CAD, kaas oo u dhigma dhismayaasha, si kastaba ha ahaatee, markii polylines dib loo eego, laba geesood oo asal ah (2) ayaa ka maqan CAD-kii asalka ahaa:
Haddii dhacdo in ururinta laga soo qaado faylka CAD-du:
Qalabka Layers CAD, qalabka Fikradda loo yaqaan "Polygon" qalabkan waxaa loo isticmaalaa marka ay jiraan hubin xogta ka imanaysa CAD-ka, waxaan u baahan nahay qaabka qaab-dhismeedka. Marka la fulinayo geeddi-socodka, guddi ayaa la furay, halkaasoo ay ku waydiisanayso in la sheego taas ama lakabadaha ama lakabta loo badalayo.
Sanduuqa waa la hubiyaa haddii aad rabto inaad ilaaliso sifooyinka CAD, ArcGIS Pro ayaa dhowr meelood oo dhowr ah leh oo leh qaab gaar ah ee xogta noocan ah.
Haddii hay'adaha ay la xiriiraan qoraalka ama calaamadaha CAD, calaamadahaas waxaa lagu hayn karaa qaabka la abuurayo.
Xaaladdan, in faylka CAD uu yahay "fiyoolojiga", Iyadoo geeddi-socodkii hore ay suurtagal tahay in la soo saaro hal-xayir-qaad keliya, maaddaama qalabku aanu aqoonsanayn qaab-dhismeedka kale sababtoo ah way furantahay, taasi waa, ma aha garaan-buuxa. waayo lakabka ayaa la abuuray geeso badan ayaa la sameeyay waana qaabka la abuuray.
Marka laga hadlayo tuulada, waxaad dooran kartaa polylines kuwaas oo sameeya oo isticmaali kara qalabka si loo abuuro qaabka qaabka geeska.
Maxaa ku dhacaya qalabkani, waa in aad haysatid nabadgelyo guud oo ka mid ah qodobbada ay yihiin kuwo badan; haddii aysan ahayn, waxay abuuri doontaa lakab la mida khaladka daruuriga, maadaama mashaakilaadka lakabku is-gooyo midba midka kale, sida tusaya tusaalaha marka la isku dayayo in lagu bedelo dhammaan qaybaha CAD ee qalabkani:
Xakamaynta, qaybaha Indhoolayaasha indhoolayaasha ah
Natiijada ugu dambeysa
Ka dib markii la samaynayo hababka ku habboon lakabka kasta waxaanu haysan doonaa waxyaabaha soo socda:
Qaabka qaabka sawirada qaabka polygoonka
Wabiyada ku jira qaabka loo yaqaan 'polyline'
Dhismayaasha qaabka geesoolaha
Lafilayo qaabka xajmiga.
Hadda waxaan ku shaqeyn karnaa oo samaynnaa falanqaynta loo baahan yahay, iyada oo la tixgelinayo muhiimada ay asal ahaan ka soo jeedaan xogta, qaabkeedaba iyo is-bedelkeedaba. Halkan ka dhageyso natiijada soo baxda.
Casharkaan waxaa laga soo qaatay casharka 13 ee Koorsada Easy ArcGIS Pro, oo ay ku jiraan fiidiyoow iyo talaabo sharaxaad kore. Koorsadu waa diyaar Ingiriisi y en Español.
Post Previous«Previous Digital Twin - BIM + GIS - ereyo ka ciyaaray shirkii Esri - Barcelona 2019
Post Next Isbarbardhig cabbirka wadamadaNext »